Krishnap.com.np: फाइल डिलिट भएको कसरी recover हुन्छ -II
फाइल डिलिट भएको कसरी recover हुन्छ -II
यस भागको सुरुवात चाँही format गर्नु भनेको के हो ? यस्ले हार्डडिस्क मा के परिवर्तन ल्याउछ ? त्यस्तै partition गर्नु भनेको के हो ? र partition गर्नुको मुख्य कारण के हो ? भन्ने कुरा बाट सुरु गरौ त्यसपछी पुन उही format गरेको partition को फाइल पनि recover कसरी हुन्छ भन्ने बिषयमा जान्छौ र त्यसलाई केलाउने प्रयास गर्छौ । र अन्त्यमा केही recovery सफ्टवेर कसरी चलाऊने त्यस्को जानकारी लिने छौ । निक्कै समय पश्चात यो भाग पोस्ट गर्दै छु । यो ढिला हुनुमा केही त नेपाल को लोड शेडिङ र मेरो आन्य समस्या हो । जुन बेला मलाई फुर्सद भएर यसो लेख्ने जागर भयो त्योबेला लाइन भएन । फुर्सद न भएको बेला लाइन भएर के गर्ने । खैर यो त भय मेरो समस्या ।
फाइल-सिस्टम एउटा यस्तो प्रबिधी जसले स्टोरज डिभाइसमा फाइल अथवा फोल्डरहरुलाई मिलाएर छिटो तथा सजिलो निकाल्न र राख्नको लागि कुनै पनि स्टोरेजमा रखिन्छ । एउटा कुरा के प्रष्ट पारौ भने कुनै पनि स्टोरेज डिभाइसमा फाइल सिस्टम नभए सम्म फाइल अथवा फोल्डर अझ भनौ केही पनि राख्न सकिन्दैन । र फरम्याट गर्नु भनेको चाँही त्यही फाइल सिस्टमलाई हार्डडिस्कको partition मा लेख्नु अथवा install गर्ने process भन्ने बुझिन्छ । अनी यसो गर्दा पुरानो फाइल मेटिनुको मुख्य कारण भने त्यो म्यानेज गर्ने सफ्टवेरनै पुरानो बाट नयाँ हुँदा पहिलेको फाइल सिस्टमले बनाएको सुँचीहरु सबै डिलिट गरी नयाँ सिस्टम बनाउने हुँदा पुरनो फाइल डिलिट भएको देख्छौ । यहाँ मैले भने नि फरम्याट गर्नु भनेको पुरनो सुची लाई डिलिट गरेर नयाँ सुची बनाउनु रहेछ तर बिषयत जस्ताको त्यस्तै छ । यस्लाई प्रष्ट पार्न एउटा उदाहरण दिन्छु । एउटा लाइब्रेरी छ जहाँ १०० हानाको दराज छ (यसलाई हार्डडिस्क को पार्टिसन मन्नुहोस्) । अब तपाईंले हरेक हानालाई एउटा नम्बर दिनु भएको छ र त्यस्को एउटा सुची बनाउनु हुन्छ(यस्लाई फाइल सिस्टम ले बनाउने सुची मन्नुहोस्) जहाँ के लेख्नु हुन्छ भने १ नम्बर हानामा कुनै लेखकको किताब छ २ हानामा अर्कै लेखकको किताब छ । अब मानौ तपाईंले सुची बाट १ हानामा किताब नभएको भनी मेटाउनु हुन्छ भने नयाँ लेखकको किताब राख्नकोलगी १ नम्बरको हाना खाली छ । तर खसमात खाली सुची मात्र न डिलिट गर्नु भएको हो । यसै कारण तपाईंको सफ्टवेर ले डिलिट भएको फाइल पनि recover गरेकोहो तर अब नयाँ लेखकको किताब ल्यएर पुरनो किताब हटाइ नयाँ चाँही राख्नु भयो भने, अब भने तपाईंको recovery सफ्टवेरले काम गर्दैन । भन्नुको मतलब तपाईंले हार्डडिस्क बाट फाइल डिलिट गर्नु भयो भने recover त हुन्छ तर यदी नयाँ फाइल राख्नु भएको छैन भने मात्र । त्यस्तै फरम्याट गर्नु भनेको पनि नयाँ सुची बनाउनु हो तर किताब त हाना बाट हटायको त छैन । त्यसैले फरम्याट गरेको ड्राइभ बाट पनि फाइल recover हुन्छ तर नयाँ फाइल रख्नु भयो भने चाँही त्यस्ले पुरनो फाइललाई मेटायर बस्ने हुँदा recover हुँदैन । यस्तै partition को केश मा पनि लागु हुन्छ ।
partition गर्नु भनेको पनि logically टुक्रा गर्नु हो भन्नुको तात्पर्य के भने हार्डडिस्क एउटैहो तर धेरै हार्डडिस्क जस्तै गरेर भाग गरी चलाऊनु हो। यो मात्र operating सिस्टम को लागि हो । वास्तवमा हार्डडिस्क त एउटै हुन्छ । यो logically गरिने partition को जानकारी MBR मा हुन्छ र त्यो partition delete गर्नु भनेको पनि त्यो MBR बाट त्यो जानकारी हटाउनुहो । भन्नुको मतलब फाइल त जस्ताको तेस्तै नै छ । न देखिएको मात्र हो । अब recovery softwarele जुन साधारण तरिक बाट हेर्ने भन्दा पनि अगी दिएको उधारणा अनुसार भन्नु पर्द हानामा नै गएर किताब निकल्ने हुन्छ न कि सुचिमा मात्र हेरेर जस्ले गर्दा डिलिट भएको फाइल होस् अथवा format नै किन नभएको होस् । अझ भन्दा partition नै डिलिट भएको भये पनि यदी नयाँ फाइल थपिएको छैन भने उक्त हार्डडिस्क बाट फाइल अथवा फोल्डर जस्ताको त्यस्तै निकल्न सकिन्छ(केही फाइलहरु अपवादको रुप मा देखिन्छन) ।
अब सफ्टवेर चलाऊने तरिका ।
पहिले सफ्टवेर डाउनलोड गर्नुहोस् र जिप गरिएको छ भने त्यस्लाई unzip गर्नुहोस् ।
अब प्रोग्राम इन्स्टल गर्नुहोस् ।
स्टार्ट मा क्लिक गरी all programs मा क्लिक गर्नुहोस् र runtime software मा माउस लिएर जानुहोस् अब तपाईंलाई दुइटा option दिन्छ त्यस मध्य यदी तपाईंको हार्डडिस्क FAT बाट फरम्याट भएको छ भने GetDataBack for FAT छन्नुहोस् यदी NTFS बाट छ भने GetDataBack for NTFS छन्नुहोस् ।
बाँकी त्यह wizard ले तपाईं लाई सहयोग गर्ने छ । यदी त्यस्मा पनि समस्या आएमा तल दिएको ठेगाना मा गई आफ्नो समस्या पोस्ट गर्नु होला ।
Posted by Krishna Pokhrel at 10:18 PM
Anonymous November 16, 2009 at 1:53 AM
कृष्ण जिी तपाईको लेखको लागी मुरी मुरी धन्यबाद तपाईको लेख पढेने एक विधार्थि
शेखर November 14, 2010 at 4:02 AM
कृष्ण जी नमस्कार, उपयोगी लेखहरु को लागी धन्यवाद। तपाईको ब्लगमा धेरै उपयोगी लेखहरु रहेछन्। तर,आफुलाई आवश्यक लेखहरु खोज्न हप्ठेरो लाग्यो। नयाँ पाठक भएर हो की? सुबिधाको लागी एउटा पानामा वा एक छेउमा सबै लेखहरु को विवरण राखनु भए कसो होला?
डिलिट भएको फाइल कसरी recover हुन्छ - I
कम्प्युटर हार्डडिस्क र प्रोसेसर तपाईंको राम्रो कि ...